PSJTV | सेनाले सीमा सुरक्षा गर्ने कि व्यापार ? बन्दुक बोक्ने कि ब्रिफकेस?
काठमाडौं : सीमा अतिक्रमणको घाउले देश पीडामा छ, त्यही कालापानीमा पनि भारतीय अर्धसैनिक र सैनिकका आठवटा पोस्ट छन्, तर सिमानामा नेपाली सेनाको एउटा पनि पोस्ट छैन । अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाको रक्षक सेना व्यापार र ठेक्कापट्टामा व्यस्त छ, यो वर्ष मात्र सेनाले १९ अर्बको ठेक्का हात पारेको छ ।
पूर्वरक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधान भन्छन्, ‘नेपाली सेना सीमामा नखटिने हो भने उसको के काम ? ठेक्कापट्टा र विकास निर्माण गर्न त देशमा ठेकदारहरू छँदै छन् नि ?’ सेनाले राष्ट्रसंघको आग्रहमा अन्य द्वन्द्वग्रस्त देशमा गएर उत्कृष्ट काम गर्ने, तर आफ्नै देशको सीमा मिचिँदा केही गर्न नसक्नु लज्जास्पद अवस्था भएको उनको भनाइ छ ।
– चिकित्सा शिक्षा (नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान भण्डारखाल, नर्सिङ महाविद्यालय, मेडिकल पोलिटेक्निक महाविद्यालय)
-काठमाडौं, ललितपुर, बुटवल र तनहुँमा पेट्रोलपम्प
-काठमाडौं, पोखरा र नेपालगन्जमा सैनिक अस्पताल
-काठमाडौंको कीर्तिपुर, चितवन र नुवाकोटमा जग्गा व्यापार
-काठमाडौं, भक्तपुर, धरान, चितवन, पोखरा, सुर्खेत, कैलालीमा आवासीय विद्यालय सञ्चालन
-रिपुमर्दिनी अक्सिजन प्लान्ट
-सुन्दरीजल वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट
-राष्ट्रिय निकुन्ज, वन्यजन्तु तथा सिकार आरक्षको सुरक्षा ३ अर्ब २९ करोड ५६ लाख (वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट)
सरकारको निर्णयविपरीत सेनाले बढी शुल्क उठाइरहेको समाचार केही दिनअघि नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित भएपछि सेनाको कलेजका प्रिन्सिपलसहितको टोलीले चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल गरेको थियो । आयोगका पदाधिकारीले बढी लिएको भए समायोजन वा फिर्ता गर्नुपर्ने बताएका थिए । तर, कलेजका अधिकारी ‘स्पष्ट नभएको’ भन्दै फिर्ता गर्ने पक्षमा देखिएका छैनन् । ‘सेनाको कलेजबाट प्रिन्सिपलसहितको टोली आउनुभएको थियो, छलफलमा बढी लिएको भए शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने निर्णय भएको बतायौँ । उहाँहरूले विश्वविद्यालयलाई गरेको परिपत्रको फोटोकपी पनि लैजानुभएको छ,’ आयोगका सदस्यसचिव तथा प्रवक्ता डिल्ली लुइँटेलले भने ।
सेनाको कलेजले तोकिएभन्दा बढी शुल्क मागेको भन्दै छैटौँ ब्याचका विद्यार्थीले चिकित्सा शिक्षा आयोगमा उजुरी गरेका छन् । विद्यार्थीको उजुरीपछि बसेको बैठकमा आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीले प्रमाण नभएको भन्दै सेनाको कलेजलाई पत्र लेख्न मानेनन् । अहिले विद्यार्थीले शुल्क तिरेको प्रमाणसमेत आयोगमा पठाएका छन् । नयाँ पत्रिका दैनिकमा जनार्दन बराल, भवानीश्वर गौतम र पर्शुराम काफ्लेले लेखेका छन् ।